🥇 ▷ Waxaad ku noqon kartaa sixirbararka ballaarinta cusub ee The Sims 4 ✅
Waxaad ku noqon kartaa sixirbararka ballaarinta cusub ee The Sims 4
Soo bandhigista Arts-ka Elektiroonigga ah ee E3 2019, ballaarinta ayaa la muujiyay Jasiiradda ku nool, xirmo ka kooban oo cusub oo bixin doona khibrad kuleylka kuleylka ah si The Sims 4, laakiin sidoo kale waxaa jiray xusaya ballaarinta oo yeelan doonta mawduuc sixir. Dhowr bilood ka dib, horumariyaha ayaa durba sii daayay nuxurka cusub.
Iyada oo fiidiyoow ah, Maxis wuxuu soo bandhigay wararka keenaya Dareenka sixirka, fidinta ugu dambeysa ee sameeyaha. Haddii aad had iyo jeer jeclaan lahayd inaad sixir noqoto, laakiin ciyaartooygu caadi ahaan ma oggollaan, dayac, taas The Sims 4 Waa lagu daboolay. Gudaha Dareenka sixirka Waxaad ku heli kartaa adduun sixir ah adoo adeegsanaya xariir albaab.
Meeshaan waxaad ku baran kartaa sida loo sameyo iyo saameyn ku yeelashada Sims ee kugu xeeran iyo xitaa inaad udiyaar garowdo asxaabtaada ama cadawgaaga. Qaar ka mid ah lafdhabarta ayaa kuu oggolaanaya inaad dadka kale u rogaan waxyaabo ama aad ka dhigto inay la dagaallamaan oo boosta ayaa ka dhigaya 2 qof inay jacayl ku dhacaan, weligood noolaadaan, oo ka mid ah saameyno badan oo dheeri ah. Laakiin tan awgeed waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la barto casharrada sayidka saaxiriinta iyo hawlgallada dhammaystiran.
Intaa waxaa sii dheer, khibraddan waxaad ku yeelan kartaa qof wehel kuu ah oo kuu noqon doona ilaaliye. Waxaad ka dooran doontaa mid ka mid ah xayawaanada kaladuwan waxaadna ku kalsoonaan kartaa inuu had iyo goor garab istaagi doono wuxuuna kaa caawin doonaa inaad noqoto saaxir kacsan. Tan waxaa u dheer, waxaa sidoo kale jiri doona xubno qurxiyo oo qurxin doona Sim-ka iyo sidoo kale qolalka.
Dareenka sixirka Waxaa laga heli karaa PC-ka iyadoo lagu beddelayo $ 19.99 USD. Noocyada PlayStation 4 iyo Xbox One ayaa la iibin doonaa ku dhawaad ​​1 bil kadib, Oktoobar 15.
Waxaan kaaga tageynaa fiidiyaha soo bandhiga.
Adiguna, maxaad u aragtaa ballaarintan? Miyaad jeceshahay inaad Sim-kaaga ka dhigto saygaxusiga sixirka? Waxa sida ugu badan u soo qabtay adiga Dareenka sixirka? Noosheeg faallooyinka.
Waxaan kugula talineynaa taas, haddii aad rabto inaad ku laabato The Sims 4 Si aad isugu daydid ballaarintaas, ka faa’iideyso oo sidoo kale ku raaxeyso Jasiiradda ku nool, ballaarinta taas oo aad kaga qaybqaadan karto howlo kala duwan, u habeyn karto Sim-ka oo xitaa u rogi karto macaan. Nooc cusub oo cusub oo aad isku dayi karto ayaa ah nidaamka abuurista dabeecadaha oo ku saleysan doorbidyadaada.
The Sims 4 Waxaa laga heli karaa PlayStation 4, Xbox One iyo PC. Waxaad ka heli kartaa warar dheeri ah oo la xiriira isaga haddii aad booqato feylalkiisa ama haddii aad aqriso dib u eegistayada.